DEG-DEG+AKHRISO: Dagaalada ka socda Itoobiya, & go’aamo lagu kordhiyay xaalada deg-dega ah – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DEG-DEG+AKHRISO: Dagaalada ka socda Itoobiya, & go’aamo lagu kordhiyay xaalada deg-dega ah
November 26, 2021 Xuseen 1
Xaalada dagaal ee dalka Itoobiya ayaa sii xoogeysanaysa, iyadoo jiidaha dagaalka uu gaaray arbacadii Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed Ali oo sheegay inuu hoggaamin doono dagaalka.
Dagaalka ayaa intiisa badan ka soconaya xuduudaha Tigray la wadaago Canfarta iyo Amxaarada, kuwaas labada dhinacba ay ka sheeganayaan guulo. Wallow aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya.
Beesha Caalamka ayaa ku baaqaysa in la joojiyo dagaalka, waxaana sii kordhaya digniinaha dalalka Reer galbeedka ee ku aadan in muwaadiniintooda ay ka baxaan dalka Itoobiya.
Sidoo kale, Guddiga xaalada deg-dega ah ee dalka Itoobiya oo kulan yeeshay ayaa ku dhawaaqay go’aano cusub oo la kooban 4 qodob, kuwaas oo lagu adkeynayo xaalada deg-dega ah.
HOOS KA AKHRISO GO’AANADA KASOO BAXAY GUDDIGA XAALADA DEG-DEGA AH EE ITOOBIYA.
1. Dirayska gaarka ah waxa ay leeyihiin xeer lagu labbisto oo iyaga u gaar ah.
Xidhashada ama ku-labbisashada direeska sida ka baxsan sharciga iyo nidaamkan cid kasta oo ugu labbista ayaa carqalad ku ah hawlgalka.
Haddaba, xaalad kasta, goob iyo waqti kasta ciidamada difaaca, booliska Federaalka; Waxaa mamnuuc ah in la xidho direeska ciidammada gaarka ah ee dowladda iyo kuwa booliska caadiga ah iyo sida oo kale ciidammada gaarka ah.
Ciidammada ammaanka ayaa lagu amray in ay tallaabo ka qaadaan ciddii lagu arko iyaga oo xidhan direeska, kaas oo aan wadan aqoonsi aan la cusboonayay.
2. Ol’olaha badbaadada dalkeena maanta waa in si adag loogu dhaqmaa si taxadar lehna loogu hoggaansamaa. Sidaa darteed waa mamnuuc in la qeybiyo ama lagu faafiyo dhaq-dhaqaaqa kasta oo ciidan, hawlgallada dagaalka iyo natiijada ka soo baxda war-baahin kasta, marka laga reebo kuwa uu oggol yahay bayaanka xaaladda deg-degga ah.
Bayaanka Xaaladda Deg-degga ah.
Xabash yuusan soo dhaafin xuduudaha somaaliyeed. Hadii hal mid ah soo gudbo waxaa ku xigin malaayin xabashi ah . Biyo kaa badan iyo dad kaa badan wey ku harqiyaan.